Moto G6 na G6 Play: Nkọwapụta, ọnụahịa na imewe leaked | Gam akporosis
Nke a dị ka izu nke ntapu Motorola. Maka na nso nso a anyị kwurula banyere ekwentị ọhụrụ nke ika ahụ nke ga-abụ akụkụ nke nso Moto Z. Ugbu a, ekpughere ụdị ọhụụ abụọ, gbasara nkọwa ndị amaburu na mbụ. Ọ bụ ihe gbasara Moto G6 na G6 Play. Abụọ n'ime ngwaọrụ ọhụrụ ahụ nke a ga-etinye n'ime katalọgụ akara a n'oge na-adịghị anya.
Ekwurula ekwentị abụọ a na mbụ. Ugbu a, anyị nwere foto mbụ na nkọwa nke abụọ ahụ. Yabụ ndị a Moto G6 na G6 Play edebelarị ihe nzuzo maka anyị. Kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ekwentị ndị a?
A na-atụ anya ka a gosipụta ọkwa a na MWC 2018. Mana ọ dị ka Motorola ahọrọla igbu oge ngosi a, iji gbochie ekwentị ịghara ịhụ. Otu ọnwa mgbe ihe omume telephony dị na Barcelona anyị amatala ozi mbụ gbasara ụdị abụọ ahụ.
1 Nkọwapụta Moto G6
2 Nkọwapụta Moto G6 Play
Nkọwapụta Moto G6
Nke mbụ, anyị na-ahụ ihe nlereanya a, Moto G6. Ọ bụ ekwentị na-akụ nzọ na ihuenyo na-enweghị okpokolo agba, na-ewu ewu na ahịa. Ọ nwere ihuenyo 5,7 nke anụ ọhịa na mkpebi HD zuru ezu na usoro 18: 9. N'ime ekwentị a Snapdragon 450 processor, tinyere 3 ma ọ bụ 4 GB nke RAM. Na mgbakwunye na 32 ma ọ bụ 64 GB nke nchekwa dị n'ime.
Moto G6 a nwere igwefoto abụọ na azụ. Ọ bụ igwefoto 12 + 5 MP. Mgbe ọ nọ n'akụkụ ahụ n'ihu igwefoto 16 MP na-echere anyị. Anyị nwere ike ịmaraworị na ọ ga-enwe gam akporo Oreo dị ka sistemụ arụmọrụ. Na mgbakwunye, ọ ga-enwe a 3.000 mAh batrị. Yabụ na o kwesịrị inye ndị ọrụ ikike kwụụrụ ha.
Banyere ọnụahịa, Ekpughewo na Moto G6 na-atụ anya ka ọnụahịa ya dị ihe dị ka euro 210. N'ihi ya, ọ ga-abụ ọnụahịa yiri nke onye bu ya ụzọ. Ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume na ọnụahịa ikpeazụ dịtụ ọnụ. Mana ekwenyebeghị ya.
Nkọwapụta Moto G6 Play
Na nke abụọ anyị na-ahụ ihe nlereanya a, nke yiri nke mbụ. Ọ nwere ihuenyo 5,7-anụ ọhịa na mkpebi HD +. Ọ bụkwa ihuenyo dị ka nke ihe atụ gara aga, n'ihi ya, ọ na-akụ na okpokoro agba. N'ime anyị na-ahụ Snapdragon 430. Banyere RAM na nchekwa dị n'ime ya ekpughebeghị. Ma, ha na-atụ anya na ha ga-abụ otu ma ọ bụ yie ekwentị gara aga.
Banyere ngalaba foto, Moto G6 Play nwere otu igwefoto na azụ. Ọ bụ a Igwefoto 13 MP. Onweghi ihe ekpughere banyere igwefoto igwe n'ihu. Dị ka nwanne ya nwoke nke okenye, ọ ga-ebu Android Oreo dị ka ọkọlọtọ sistemụ. Ọzọkwa, na nke a ị ga-enwe nnukwu batrị. Ebe obu ya batrị ga-abụ 4.000 mAh. Ihe doro anya ga-enye gị nnwere onwe dị ukwuu.
Ọnụ nke Moto G6 Play ga-abụ ihe dị ka euro 165, ọnụahịa nke ihe ndị na-adọrọ mmasị na-atụle nkọwa nke ngwaọrụ ahụ. Ọ bụ ezie na ihe niile yiri ka ọ na-egosi na n'ahịa Europe ọnụahịa ya ga-adịtụ elu karịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » Motorola Moto G6 na G6 Play leaked na zuru
Eder… like… »na-enweghị okpokolo agba»… anyị na-ahụ otu foto, gị na adịghị m? 😉